News HourZimbabwe Archives - News Hour Zimbabwe Archives - News Hour
Robert Mugabe, Zimbabwe’s first post-independence leader, has died aged 95. He died after battling ill health, his family confirmed to the reporters. Mr Mugabe had been in hospital in Singapore since April. He...
by Mridha Shihab Mahmud - Mar 9, 2019
Former Zimbabwe Cricket Director Enock Ikope has been banned from all cricket for 10 years after the ICC Anti-Corruption Tribunal found him guilty of breaching three counts of the ICC Anti-Corruption Code. The...
Zimbabwe started to trade its new currency
Zimbabwe started on Friday to trade its new currency, the RTGS dollar, two days after the central bank announced measures to try and resolve a chronic monetary crisis. On Wednesday, the bank unveiled...
Openers shine as Tigers clinched the three-match ODI series with one match in hand beating visiting Zimbabwe by seven-wicket in the second ODI held on Wednesday at Zahur Ahmed Chowdhury Stadium. Chasing a...
Bangladesh captain Mashrafe Mortaza reluctant to take Zimbabwe lightly in the ODI series as he already warned his boys against complacency ahead of the start of ODI series against visiting Zimbabwe tomorrow (Sunday)....